Hoi An, pealu nke Vietnam | Akụkọ Njem
Maria | | Asia njem, Vietnam
Foto | Ndị Traveleros
Vietnam bụ ala mara mma na nke sitere n'okike nke ọdịbendị ya na-atọ ụtọ mgbe niile na ebe obere obodo ndị nwere ugwu ugwu na-ebikọ ọnụ na megacities dị egwu.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Vietnam nọ na egbugbere ọnụ nke ndị njem niile n'ihi nnukwu ihe nketa ya, karịsịa maka osimiri ya paradaịs na ogige ntụrụndụ ya ndị mara mma nke Phong Nha-Ke Bang bụ Ebe Ihe Nketa Herwa.
Nchọpụta nke ọdịnala ọdịnala nke mba Asia a mara mma bụ isi ọzọ iche dịka ọ nwere mmetụta ọdịnala sitere na mba ndị dị iche iche dịka China ma ọ bụ France.
N'oge ụfọdụ mmadụ niile nụrụ banyere Hanoi, isi obodo Vietnam. Agbanyeghị, obodo nke asọpụrụ ịbụ onye a kacha mara amara bụ Hoi An, nke dị n'etiti etiti mba ahụ. Na ntinye na-esonụ anyị ga-elekwasị anya na Hoo An, yabụ ị nwere ike ịmata pealu nke Vietnam nke ọma.
1 Hoi Otu Histlọ Akụkọ Ihe Mere Eme
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na Hoi An?
2.1 Àkwà Mmiri Japan
2.2 Hoi An Museum
2.3 Hoi Otu ụlọ ọdịnala
2.4 Plọ nke ezinụlọ Tran
2.6 Ahịa Hoi An Cho
3 Gaghị agbaghara…
Hoi Otu Histlọ Akụkọ Ihe Mere Eme
Ebe ọ bụ na Hoi An bụ obere obodo, ọ dị mfe iji ụkwụ ma ọ bụ ịnyịnya ígwè na-aga n'okporo ámá ya. Ọtụtụ n'ime ha na-agagharị agafe ka ị wee nwee ike ịga ije ogologo oge na nwayọ na-enwe mmasị na ụlọ ndị China wuru ebe a ihe karịrị otu narị afọ gara aga. Ka ọ dị ugbu a, ụfọdụ n'ime ha abụrụla ụlọ ahịa maka ndị njem nleta, agbanyeghị na echekwara ụfọdụ ụlọ.
Walkga n'okporo ámá nke Hoy An ka a ga-ebufe ya n'oge ọzọ. Site na iwu nke Unesco, echekwala ihe karịrị narị ụlọ ọrụ XNUMX mere nke mere na ọdịdị ha dị ka nke ọtụtụ narị afọ gara aga.
Pagodas, ụlọ ọdịnala, ụlọ arụsị, ụlọ ndị mara mma ... ọnọdụ a na-enweghị ihe ịga nke ọma na enweghị okporo ụzọ na-enye obodo ahụ ọnọdụ nrọ dịka nke oge gara aga. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, na UNESCO kwupụtara ya na World Heritage Site na 1999.
Àkwà Mmiri Japan
Naanị ịtụgharị uche n'àkwà mmiri a, ọ bara uru ileta Hoi An. N'ịbụ nke magburu onwe ya mara mma, obodo Japan nke ndị ahịa na-ewukwasị ya n'elu Thu Bon Bon iji jikọta Chinatown na ndị Japan.
Àkwà mmiri ahụ bụ ụlọ dị mita iri abụọ nke jikọtara abụọ n'okporo ámá ndị dị n'obodo ahụ: Nguyen Thi Minh Khai na Tan Phu. Ọ mejupụtara n'elu osisi kpuchie na taịl nile, handrail osisi na mgbidi kpuchie na a muted-acha ọbara ọbara.
Ejiri otu ihe oyiyi anụmanụ dị ka enwe na nkịta na-echekwa njedebe nke ọ bụla. Ime dị iche iche dị na ịchọ mma buru ibu na ebe ịchụàjà dị n'etiti, na-asọpụrụ chi nke ihu igwe.
Followinggbaso mweghachi nke 1986, àkwà mmiri ahụ ka na-adị n'ụdị mbụ ndị Japan wee bụrụ akara ngosi Hoi An.
Foto | Nduzi Njem Vietnam
Obere mita ole na ole site na Bridge Bridge, Sa Huyn Museum dị na pagoda ochie. A na-echekwa ụfọdụ seramiki nke ndị ọbịa mbụ Hoi An, Sa Huynh, nke malitere na 1.000 BC. Thelọ ihe ngosi nka adịghị oke oke ya mere enwere ike ịhụ ya ngwa ngwa na ọkara elekere.
Muselọ ihe ngosi nka ndị ọzọ na-adọrọ mmasị ịga leta bụ Hoi An Museum na ngosipụta nke ọdịdị agbụrụ ma ọ bụ Museum of Ceramics Trade, ebe egosiri na Vietnam, India, Thailand, China ma ọ bụ Middle East. Ha niile na-egosi na obodo ahụ bụ ebe iwu kwadoro nke gafere ụzọ ndị gafere Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. N'ikpeazụ, ịga na Taller de la Seda ga-enye gị echiche banyere mkpa nke ngwaahịa a maka obodo ahụ ka ọ na-etinye ya n'okporo ụzọ silk mba ụwa wee mee ka a mara ya n'ụwa niile.
Hoi Otu ụlọ ọdịnala
Ọ bụ n'ụlọ ọdịnala Hoi An ebe a pụrụ ịmasị mmetụta nke ọdịbendị dị iche iche gafere n'obodo ahụ nke ọma ka ụlọ ha jikọtara Vietnamese, Japanese, Chinese or European. Ogige ya dị n'ime ya kwesịrị nleta.
Offọdụ ụlọ ọdịnala akwadoro na Hoi An bụ ụlọ Quan Thang ma ọ bụ Tan Ky House.
Plọ nke ezinụlọ Tran
A na-ahụta ya dị ka otu n'ime ụlọ kachasị mma na nke kacha ochie na Hoi An. Ọ malitere na narị afọ nke XNUMX wee pụta maka usoro ọdịnala ọdịnala ya. A na-efe ndị nna ochie nke ezinụlọ Tran ebe a.
Ihe kachasị dị egwu banyere plọ Ekpere nke ezinụlọ Tran bụ ogige 1500 m2 nke e wuru dị ka ụkpụrụ Feng Shui si dị.
Pagodas abụọ na Hoi An bara uru: Van Duc Pagoda na Chuc Thanh Pagoda. Ihe kachasị dị egwu banyere Van Duc Pagoda bụ akụkụ ya na nnukwu ụlọ eze, nke kewara ụzọ ise. Abụọ n'ime oghere ndị ahụ bụ paseeji na atọ bụ maka ofufe. Ọ ga-adịrị gị mfe ịhụ ndị mọnk Buddha n'akụkụ ebe a.
Banyere Chuc Thanh pagoda, ọ bụ nke kasị ochie na Hoi An ma hiwe ya na XNUMX narị afọ. N'ime ya ị nwere ike ịhụ nchikota nke ụdị ndị China na Vietnam.
Ahịa Hoi An Cho
Na ndagwurugwu Thu Bon River bu Cho Cho, ebe di egwu ma di omimi nke gosiputara izi ezi nke ndu ndi Vietnam. N'ime ya ndị ahịa na-ere ihe niile sitere na azụ na anụ ruo na ngwa nri ma ọ bụ silk.
Foto | Hoi An Njem Nri
N'oge ịnọ na Hoi An, ị gaghị echefu obodo ahụ n'abalị. A na-eji oriọna ndị e ji aka mee ka ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme chọọ mma mara mma nke World Heritage Site. Gaghị echefu ya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Hoi An, pealu nke Vietnam